War - BBC Somali
Sacuudiga oo Xuduudda u furay Xujayda Qadar
Warbaahinta dalka Sacuudiga ayaa sheegtay in xukuumada sacuudiga ay xuduudda u furayso dadka u dhashay Qadar si loogu ogolaado in ay gutaan waajibaadka Xajka.
17 Agoosto 2017
Baarlamaanka Lubnaan oo meel adag ka istaagay dambiyada kufsiga
Baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa meesha ka saaray sharci dhigayay in la saamaxo ninkii guursada gabadha uu kufsaday sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Wasiirka caddaaladda ee Australia oo diiday in uu haysto dhalashada UK
Wasiirka caddaaladda ee Australia Michael Keenan ayaa diiday in uu haysto dhalasho kale oo British ah, ka dib markii uu noqday qofkii u dambeeyay ee ay soo wajahdo fadeexad labo dhalasho ah.
Tirada qaxootiga Suudaanta Koonfureed oo korortay
Hay`adda arrimaha qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa sheegeysa in tirada qaxootiga Suudaanta Koonfureed ee ku sugan dalka Uganda ay kor u dhaaftay 1 milyan. Tan oo ka dhigeysa mid ka mid ah xasaradaha bini`aadannimada ee ugu weyn dunida.
Grace Mugabe oo codsaneysa xasaanad diblomaasiyadeed
Dowladda Zimbabwe ayaa xasaanad diblomaasiyadeed u raadineysa xaaska madaxweyne Robert Mugabe oo ku aaddan kiiska xadgudubka ah ee loo haysto, kaas oo ka dhacay dalka Koofur Afrika, sida ay sheegtay wasaaradda booliiska Koofur Afika.
Dad ku dhintay duqemaha cirka ee Suuriya
Toddoba iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka ah oo magaalada Raqqa ee dalka Suuriya ay ka geysteen isbahaysiga uu Mareykanku hoggaaminayo.
Muhaajiriin laga soo badbaadiyay xeebaha Spain
Ilaalada xeebaha dalka Spain ayaa soo badbaadiyay ku dhowaad lix boqol oo qof shan iyo toban doon—oo ka soo shiraacday dalka Marooko.
Hargeysa oo lagu qabtay shir sare loogu qaadayo wax soo saarka beeyada
Hargeysa waxaa lagu qabtay shir-hawleed saddex maalmood soconaya oo sare loogu qaado wax soo saarka iyo ka ganacsiga beeyada, xabkaha iyo faleenka
Hirshabeelle oo ku kala qaybsan xil ka qaadista madaxweyne Cosoble
Waxaa aad isu soo taraya xiisadda siyaasadeed ee ka jirta magaalada Jowhar kadib markii xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle iyo guddoonka ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cosoble oo isaga diiday in xilkaasi laga qaaday.
16 Agoosto 2017
Raila Odinga oo muranka doorashada Kenya geyn doono maxkmadda
Hogaamiyaha mucaaradk Kenya, Raila Odinga ayaa sheegay inuu maxkmadda ugu sarreysa dalka geyn doono dacwad ka dhan natiijadii doorashada madaxtinnimada Kenya ee lagu dhawaaqay isbuucii la soo dhaafay.
Therasa May oo diiday in la damiyo saacadda ay caanka ku tahay London
Big Ben oo sidoo kale ka mid ah astaamaha caanka ah ee London ee durba kuu muuqanaya marka aad magaalada tagto, ayaa waxa ay sidoo kale tahay astaan maqalkeeda adduunka dhan caan ka ah maadaamaa muddo aad u dheer laga baahin jirey idaacada BBC-da.
Maxay dunidu uga dabo dhacday Fariinta uu Obama soo dhigay Twitter-ka?
Waxaa laga yaabaa in Twitter-ku yahay barta uu madaxweyne Trump ugu jecel yahay marka uu doonayo in uu fariin gudbiyo, laakiin fariin uu bartaas ku qoray madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa noqotay midda loogu jecelyahay taariikhda Twitter.
Maxay sidan ugu burbutay magaalada Awaamiya ee dalka Sacuudiga?
"Markii aan gaarnay magaalada Awaamiya, heerka burburka ku dhacay magaalada waxa ay ahayd wax laga argagoxo, waxa ay u ekaatay sidii furin dagaal oo kale sida inaga oo joogna Mosul iyo Allepo" ayuu yiri wariyaheena Sally Nabil.
Daawo daadadka ku dhuftay Freetown
Dagaalka daroogada ee Philippine oo dhiigii ugu badnaa loo daadiyay
Booliiska ayaa dilay 32 ruux, waxaana loo malaynayaa in uu yahay dilkii ugu badnaa ee darooga ka dhan ah ee maalin gudaheed dhaca.
Trump oo labo dhinac ku eedeeyay dhibka Virginia
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale labada dhinacba ku eedeeyay daganaansho la'aanta deegaanka Charlottesville ee ku yaalla gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Xaaska Mugabe oo Zimbabwe ku laabatay iyadoo tacaddiyo loo haysto
Marwada koobaad ee dalka Zimbabwe Grace Mugabe ayaa dalkeeda ku laabatay iyadoo lagu eedeeyay in ay tacaddi u gaysatay gabadh yar oo labaatan jir ah.
Dad ku dhintay qarax ka dhacay Nigeria
Saddex haween ah ayaa lagu soo warramayaa in weerar is miidaamin ah ay ka fuliyeen waqooyi bari dalka Nigeria, kaas oo galaaftay ugu yaraan 27 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalkaasi.
Madaxweynaha Colombia: Dagaalkii lagula jiray FARC si dhab ah ayuu u soo afjarmay
Gaarigii ugu dambeeyay ee ay ku raran yihiin hub ay leeyihiin kooxdii hore ee mucaaradka dalka Colombia, ee FARC ayaa laga saaray meelo ka mid ah dalkaasi, iyadoo taageero laga helayo Qaramada Midoobay.
Geed soo jabay oo dad ku dilay Bortaqiiska
Ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay afartan iyo sagaal kalena way ku dhaawacmeen Kaniisad ku taalla jasiiradda Madeira ee dalka Bortaqiiska.
15 Agoosto 2017
Maxaad kala socotaa dhaxal sugeyashii eersaday dhaliisha boqortooyada Sacuudiga?
Bulshooyinka Tanzania ee ku nool ugaarsiga kashiitada
Messi oo guursaday saaxibtii
Aaden Barre oo ka warramay ajandaha xisbigooda guulaystay